Ulingo lwezonyango lwepilisi yohlobo lokugonya lwe-COVID-19 luqala kwa-Israyeli
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Ulingo lwezonyango lwepilisi yohlobo lokugonya lwe-COVID-19 luqala kwa-Israyeli
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Zonke izitofu ezikhoyo ze-COVID-19 zilawulwa ngenaliti enye okanye ezimbini.
Ulingo lwezonyango kumavolontiya angama-24 angagonywanga lwenguqu yedosi enye yethonya lesitofu esivunyiweyo.
I-capsule inokusetyenziswa njengesixhaso ngokuchasene nokuchaphazeleka okungafaniyo kweDelta.
Ipilisi yayivavanye iihagu kwaye izilwanyana zivelise izilwa-buhlungu emva kokuba zinikwe.
EYerusalem Amayeza oNyango ubhengeze ukuba ufumene imvume kwiZiko Lonyango laseTel Aviv Sourasky ukuba liqale ityala lezonyango kumavolontiya angama-24 angagonywanga okufumana idosi enye yencindi ye-COVID-19.
U-Oramed wabhengeza ngo-Matshi ukuba ivavanyile ipilisi yayo kwiihagu kwaye izilwanyana zivelise izilwa-buhlungu emva kokuba zinikezelwe.
Inguqulelo yepilisi yesitofu sokugonya se-coronavirus inokuba "sisitshintshi somdlalo" kumazwe anezinga eliphantsi lokugonya, utshilo umphuhlisi.
Inkampani egxile ekwenzeni iinguqulelo zomlomo zamachiza aqhelekileyo alawulwa ngenaliti, ikwangoku iqhuba izilingo kwi-capsule yayo yomlomo we-insulin ukunyanga uhlobo lwesibini lweswekile. Zonke izitofu ezikhoyo ze-COVID-2 zilawulwa ngenaliti enye okanye ezimbini.
Ngokuka-CEO we-Oramed uNadav Kidron, ulingo lwepilisi yokugonya ye-COVID-19 kulindeleke ukuba iqale kwinyanga ezayo, nje ukuba ifumane ukuvunywa kokugqibela nguMphathiswa Wezempilo.
I-Kidron yongeze ukuba ipilisi inokusetyenziswa njengesixhobo sokulwa ngokuchaseneyo nokochaphazeleka kwe-Delta.
"Isitofu sethu sokugonya somlomo, esingathembeli kunikezelo lomkhenkce onzulu ngokungafaniyo nezinye izitofu zokugonya ze-coronavirus, kunokuthetha wonke umahluko phakathi kwelizwe elikwaziyo ukuphuma kulo ubhubhane okanye hayi," utshilo uKidron.